Manohisoa - Betafo - Lehilahy voalaza fa jiolahy novonoin’ny mponina • L'Express de Madagascar
Manohisoa – Betafo – Lehilahy voalaza fa jiolahy novonoin’ny mponina
Vaovao tonga tsikelikely. Taorian’ilay tranga tany Betafo nahafatesana olona voalaza fa dahalo hatramin’ny 11 tamin’ny herinandron’ny faha-17 novambra, dia re indray fa lehilahy iray, voalaza fa jiolahy nanafika tanàna no tsy namelan’ny fokonolona tao amin’ny tanànan’I Manohisoa, kaominina ambanivohitra any amin’ny faritr’i Betafo, raha tsy tapitra ny ainy.
Raha ny vaovao voaray dia voalaza fa omby dimy no lasan’ireo notondroina ho jiolahy telo tonga nanafika ilay tanàna ny alin’ny alakamisy hifoha zoma lasa teo. Nanao ny fanarahan-dia avy hatrany ny mponina raha vao dify izy ireo ka rehefa tonga tao Sahondra, kaominina ambanivohitra Manohisoa dia nifankatratra ny roa tonta. Nisy ny fifanjevoana tamin’izany ka tsy nahatohitra ny hamaroan’ireo olona nanara-dia ireo
jiolahy izay vaky nandositra no niafarany. Tratra nandritra izany ny jiolahy iray izay niharan’ny hatezeran’ny olona ka tsy navelany raha tsy tapitra ny ainy.
Raha ny vaovao nampitain’ny tolmpon’andraikitra any an-toerana dia sesilany ny tsy fandriam-pahalemana amin’iny ilany Andrefan’ ny faritra Vakinankaratra iny tato ho ato.
Aharenesana tranganà fanafihana matetika koa ny ao amin’ny ditsrikan’ny Betafo ka isany mitondra faisana amin’izany ny ao amin’ny kaominina ambanivohitra Soavina sy ny manodidina.
Tagsbetafo vindicte populaire
RALLYE INTERNATIONAL – Sitraka de retour au volant de sa Clio
Concours – « Musique d’Afrique – Concert intergénérationnel » s’élance